Ardublock: waa maxay iyo waxa ay u qaban karto Arduino | Qalabka bilaashka ah
Ardublock: Waa maxay iyo waxa ay u qaban karto Arduino-gaaga
La wareegida looxyada Arduino waa wax duugoobay oo ku sii kordhaya meel ay gaadhaan jeebado badan, laakiin sidee u shaqaysaa? Way cadahay in si ay u shaqeyso aan u baahanahay koodh ama barnaamij fuliya hawlgalka aan rabno. Tan, nasiib darro, qof walbaa ma heli karo waana la heli karaa waxaad ubaahantahay aqoon barnaamij si aad u sameyso Arduino inuu dhaqaajiyo mooto ama shido nal.
Waxaas oo dhami waxay ka dhigeen tifaftireyaasha muuqaalka ah iyo barnaamijyada muuqaalka ah kuwo caan ah. Noocan barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad barnaamijyo ku abuurto adoo adeegsanaya baloogyada jiirka lagu jiido, iloobaya in la xiro xargaha isku laabma ama in la qoro magacyo waxqabad dheer. Qalab caan ah oo u soo bandhigaya barnaamijyada muuqaalka leh Arduino waxaa loo yaqaan Ardublock.
1 Waa maxay Ardublock?
2 Sidee loo rakibaa Ardublock nidaamkayaga qalliinka?
2.1 Diyaarinta kombuyuutarkeena
2.2 Rakibida Ardublock
3 Beddelka Ardublock
Waa maxay Ardublock?
Ardublock waa barnaamij ama halkii lagu kabayo Arduino IDE oo noo ogolaaneysa inaan abuurno barnaamijyo iyo koodh iyadoo aan loo baahnayn in la qoro koodh, taasi waa, iyada oo loo marayo qalabka muuqaalka. Tani waxay leedahay faa iidooyinkeeda maxaa yeelay haddii aan ogaanno sida wax loo barto, waqti badan ayaan ku keydin doonnaa geeddi-socodka qashin-qubka maadaama aan illoobi doonin qorista caankii ";" mana xidho xirmooyinka koodhka. Barnaamijyada aaladaha muuqaalku waa barnaamij loogu tala galay labis iyo aqoon yahan barnaamijyo iyo waliba adeegsadayaasha aan aqoon sida loo sameeyo barnaamij ee raba inay bartaan sida loo sameeyo.
Sidii aan soo sheegnay, Ardublock waa kaabis badan yahay barnaamij laftiisa maadaama ay lagama maarmaan tahay in la helo Arduino IDE howlaheeda. Sidaa darteed, samaynta kooban, waxaan dhihi karnaa Ardublock waa u qaabeyn Arduino IDE ah si loogu waafajiyo barnaamijyada koodh u sameynta barnaamijyada muuqaalka ah.
Ardublock wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo wax ku ool ah marka laga reebo inuu qalab u yahay barnaamijiye cusub. Mid ka mid ah waxyaabaha wanaagsan waa suurtagalnimada la shaqee baloogyada si aad si dhakhso leh u abuurto mashaariic.
Ardublock wuxuu si muuqaal ah ugu shaqeeyaa baloogyada sidoo kale wuxuu la shaqeyn karaa qaybaha. Sidaa darteed, waxaan abuuri karnaa baloog ah taayirro, mid kale oo muusig ah iyo mid kale oo saxan ah; mar kasta oo aan dooneyno inaan adeegsanno baloogyadan waan magacaabi doonnaa ama si fudud ayaan uga soo jiidanaynaa dhinac daaqadda dhinaca kale ee daaqadda.
Hawlaha iyo fursadaha ay Ardublock na siiso waa isku mid oo Arduino IDE ayaa na siiya, taas oo ah, waxaan ku xiri karnaa Ardublock guddigayaga Arduino, u dir koodh ay Ardublock abuurtay iyada oo loo mahadcelinayo baloogyada isla markaana si dhakhso leh oo fudud loo tijaabiyo. Waana marka aan dhammeyno barnaamijka, macluumaadka la keydiyay wali waa noodh qoran, koodh Ardublock uu ku abuuray baloogyaasheena.
Sidee loo rakibaa Ardublock nidaamkayaga qalliinka?
Hagaag, horey ayaan u ogaanay ama haysannaa fikrad cad oo ku saabsan waxa uu yahay Ardublock, laakiin sidee loogu dhejiyaa kumbuyuutarkeena Sidee u isticmaali karnaa?
Inkasta oo dukumiintiyada kaliya ee jira ee ku saabsan Ardublock ay ku qoran yihiin Ingiriis, runta ayaa ah in nidaamka rakibaadda uu yahay mid fudud oo dhakhso leh haddii aan haysanno Arduino IDE. Marka hore waa inaan ku hayso kombuyuutarkayaga 'Arduino IDE', haddii aynaan rakibin, waad joojin kartaa oo arki kartaa Halkan sida loogu rakibo Gnu / Linux. Cunsur kale oo aan u baahanahay ayaa ah waxay leeyihiin mashiinka dalwaddii Java ama wixii la mid ah kooxda. Haddii aan isticmaalno Gnu / Linux, ujeedadu waa in lagu sharaddeeyo FurJDK, gaar ahaan iska hor imaadkii u dhexeeyey Oracle iyo Google. Hadda oo aan wax walba qabanay, waa inaan tagnaa bogga rasmiga ah ee Ardublock oo hel xirmada Ardublock, xirmo ku jirta qaab java ama kordhinta .jar. Faylka la soo dejiyey ma ahan feyl la fulin karo oo leh saaxir rakibid ah, markaa waa inaan wax walba gacanta ku qabannaa.
Primero Waxaan fureynaa Arduino IDE oo waxaan aadnaa Xulashooyinka ama Xulashooyinka. Hadda waxaan tagnaa ikhtiyaarka ah "Goobta qoraalka:" oo ka muuqan doona daaqad cusub. Kani waa cinwaanka aan u baahanahay inaan ku keydinno waxyaabo cayiman ama walxaha Arduino IDE. Goobta ama cinwaanka u muuqda wuxuu noqon doonaa wax la mid ah "Documents / Arduino" ama guriga / Documents / Arduino. Waan beddeli karnaa cinwaanka laakiin haddii aan beddelno waa inaan ogaannaa cinwaanka cusubi inuu u guuro faylka Ardublock ee la soo dejiyey halkaas. Haddii aan furno galka Arduino waxaan arki doonaa inay jiraan fayl-hoosaadyo iyo faylal kale.
Waa inaan guurnaa xirmada Ardublock oo ka tagaysa cinwaanka soo socda "tool / ArduBlockTool / tool / ardublock-all.jar". Haddii aan leenahay barnaamijka IDU-da 'Arduino IDE', waa waqtigii aan xiri lahayn iyo markaan mar kale fureyno, gudahood Qalabka ama Qalabka xulashada Ardublock ayaa soo muuqan doonta. Gujinaya waxay ka muuqan doontaa daaqad cusub oo u dhiganta isdhexgalka Ardublock. Sidaad u aragto, waa wax fudud oo dhakhso leh laakiin jahwareer leh haddii aynaan garanayn habka rakibidda.
In kasta oo Ardublock u muuqan karo wax cusub oo u gaar ah Arduino, runtu waxay tahay inaysan ahayn barnaamijka ama qalabka kaliya ee ay tahay inaan ku fulino barnaamijyo muuqaal ah. Waxaa jira dhowr qalab oo diiradda saaraya barnaamijyada muuqaalka ah, illaa heer ay dhammaan xulashooyinka jira ee Ardublock ay yihiin barnaamijyo gaar ah oo aan ahayn kordhin ama wax lagu daro Arduino IDE.
Midka ugu horreeya beddelladan waxaa loo yaqaan Minibloq. Minibloq waa barnaamij dhameystiran oo diirada saara barnaamijyada muuqaalka ahSidaa awgeed, shaashaddeeda ayaa loo qaybiyaa saddex qaybood: qayb ka mid ah baloogyada la abuurayo, qayb kale oo aan u dhaqaajin doonno baloogyada aan doonayno inaan ku isticmaalno barnaamijka iyo qayb saddexaad oo muujin doonta lambarka aan abuuri doonno, waayo isticmaalayaasha horumarsan. Minibloq waxaa laga heli karaa tan isku xirka.
Qalabka labaad ayaa loo yaqaan U xoq Arduino. Qalabkani wuxuu isku dayaa la jaanqaad barnaamijka barnaamijka 'Scratch children' heer kasta isla falsafadna lagu abuuro barnaamijyo. Xoqid loogu talagalay Arduino waa barnaamij dhameystiran, marka si loo yiraahdo, fargeeto xoqan.
Qeybta seddexaad ee qalabka ayaan wali si fiican loo dhisin, laakiin waa qalab rajo leh oo ka mid ah aaladaha barnaamijyada muuqaalka ah. Qalabkan waxaa lagu magacaabaa qalab mod, qalab kaas oo ku dhashay Kickstarter laakiin si tartiib tartiib ah ugu bislaanaya hab aad u fiican. Farqiga u dhexeeya barnaamijyada kale ayaa laga yaabaa ayaa ku takhasusay dadka isticmaala layliska marka loo eego kuwa horumarsan. Ugu dambeyntiina, beddelka kale ee Ardublock wuxuu noqon lahaa adeegsiga dhaqameed ee Arduino IDE, beddel aan muuqaal aheyn oo kaliya ay heli karaan barnaamijyada ugu khibradda badan.
Ardublock waa aalad aad u xiiso badan, ugu yaraan adeegsadayaasha layliska ah. Laakiin waa run in haddii aad tahay barnaamij khabiir ku ah barnaamijyada noocan ah ma samaynayo koodh si dhakhso leh loo abuuro laakiin waa iska soo horjeed. Isticmaalka jiirka, si aan caadi aheyn, waa uga gaabiyaa isticmaalka kumbuyuutarka.
In kastoo haddii aan nahay barnaamij-yahanno khibrad leh ama aan wax baranayno, Ardublock waa kordhin ballaadhan oo lagu taliyay maahan in la yiraahdo lama huraan maadaama marxaladahaan ay tahay lama huraan in la sameeyo qaladaadka syntax iyo dhibaatooyinka yar yar ee ay adagtahay in la helo oo laga adkaado Ardublock Si kastaba ha noqotee Maxaad doorataa
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Ardublock: Waa maxay iyo waxa ay u qaban karto Arduino-gaaga
Waad salaaman tihiin Ardublock ma la shaqeeyaa noocyada cusub ee Arduino?
Jawaab Oscar Mansila
Waad salaaman tahay, Noocyadan garaafka ah waxaad ku horumarin kartaa isla barnaamijyada sida wax loo qoro Si kale haddii loo dhigo, dhammaan koodhka qoran ma lagu samayn karaa baloogyo?
Su’aal kale, sidee u qeexaysaa ama u isticmaali kartaa .h, subroutines iwm. kiiskan?
Sida loo dhiso cudud robot ah lacag yar
Sida loo sameeyo qalabka baarista beenta ee Arduino